Mubvunzo: Maonero Ehove Mumvura - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mubvunzo: Maonero Ehove Mumvura
Unoona sei hove mumvura?
Ndeapi magirazi aunogona kuona hove mumvura?
Unoziva sei pekuredza?
Hove dzinoonekwa kupi?
Ndeupi ruvara lenzi rakanakira mvura?
Magirazi ezuva ari nani pakuredza?
Magirazi ehove anoshanda zvechokwadi here?
Unogona sei kuona pasi pemvura pasina magirazi?
Ko mapolarized lenzi anobatsira kuona nemumvura?
Unogona kunyura nemagirazi here?
Garriki inokwezva hove here?
Mafuro zvinoreva hove here?
Ndeipi nguva yakanaka yekuenda kunobata hove?
Hove dzinorara here?
Hove dzinovanda papi mugungwa?
Ndeipi hove hurusa yati yamboonekwa?
Ndeipi lenzi yakanakira kubata hove?
Malenzi eGRAYA akanakira kubata hove here?
Malenzi ebhuruu kana egirinhi ari nani pakuredza?
Tarisa hove dzinoshanda dziri pasi perukova kubva kune chero isingaenzaniswi pamhenderekedzo yegungwa, bump kana imwe protrusion yaunogona kuona, senge nhevedzano yematombo anopinda mumvura. Hove dzinobata mumashure mezvipingamupinyi zvakaita seizvi, saka unogona kuva nechivimbo chekuti varipo kana uchivaona vachidya.
Magirazi ane polarized anobatsira kuderedza kupenya kunoitwa nezuva parinorova mvura. Nekupenya uku kwakabviswa, kunoita kuti iwe ugone kuona mumvura. Uyu mukana wakakura kune chero muredzi anoredza mvura isina kudzika mumadziva kana kufarira hove mumvura inoyerera yenzizi nehova.
Tsvaga zvisizvo mumicheto inonangana nehove. Tarisa pamuromo wenzvimbo refu inopinda mudhamu, umo inongoerekana yadonha mumvura yakadzika. Mupendero wesora unokwezva hove. Nzvimbo dzinoyambuka matanda kana kuumba maburi madiki dzinogona kubata hove.
Hove dzinowanikwa kunenge kwese kune mvura ine chikafu chakakwana, oxygen uye muvharo. Pedyo nemusha wako panofanira kunge paine mvura ine hove inogara mairi. Asi kubata hove, kutanga unofanira kudzidza kunzwisisa padzinovanda. Hadzisi hove dzose dzinogona kugara mumhando imwe chete yemvura.
Kana iwe uchange uri kunze kwemvura zuva rose, bheji yako yakanaka ndeye polarized grey lenses. Rudzi urwu rwe lens rwakakwanawo kumvura yakadzika yebhuruu, kuvhara kupenya, uye kukubvumira kuona mumvura zviri nani.
Mirrored sunglasses akanakira vabati vehove, sezvo anobatsira mukucheka kupenya nekuratidzira chiedza chezuva, izvo zvinoita kuti pave nekuonekwa kuri nani uye kushomeka kwemaziso.
Polarized hove magirazi anogona kubatsira kudzivirira maziso ako zvakakwana. Polarized hove magirazi anogona kuvhara ultraviolet yezuva kana UV mwaranzi, kuti isakuvadza maziso ako. Mwaranzi yeUV inogona kukuvadza nzvimbo dzakawanda dzeziso kusanganisira kukuvadza maziso ako 'cornea. Zvinokonzerawo cataracts, photokeratitis, uye kumwe kukanganisa kwemaziso.
Kana iwe ukapfeka magirazi kana kubata, unogona kuita kuti chinyorwa chako chiiswe mudhive mask. Kupfeka mask yedhivha ndiyo yakachengeteka imwe nzira yekuona zviri pasi pemvura pane kuvhura maziso, uye yakanakira chero munhu angave asingakwanise kuona zvakanaka pasina magirazi avo.
Chokwadi: Kupenya kwezuva pagungwa (nedzimwe nzvimbo) kune polarized zvakanyanya! Pamusoro pezvo, zvese zvinoratidzira kubva pazvinhu zviri pamusoro pemvura zvine polarized. Nepolarized sunglasses gungwa rinoratidza kujeka!.
Scuba Diving nemagirazi (magirazi) Kwete haugone kuita scuba diving nemagirazi. Dhizaini yemagirazi emaziso zvinoreva kuti maoko emagirazi anocheka nenzeve dzako haatenderi epurasitiki kana silicon siketi yedhivha mask kuti inamire zvakanaka pamusoro pechiso chako.
Mhinduro pfupi ndeyokuti hongu, hove segariki, asi kune zvakawanda kune iyo kupfuura izvozvo. Ongororo dzinoratidza kuti dzimwe hove dzine simba guru rekunhuhwidza. Zvinozivikanwa kuti kugona kwehove kunhuhwirira kwakapetwa ka1,000 XNUMX pane kwembwa. Vabati vehove vanga vachishandisa garlic kwechirauro chavo kwemakumi emakore nekuti ine hwema hwakasimba.
Hove dzinoda oxygen kuti dzirarame. Kana tangi yako yakatakurwa nemakemikari ane chepfu, seklorini neammonia, hove dzinowana okisijeni yadzo nekuyangarara pamusoro uye kuvhuvhuta mabhuru. Ichi chiratidzo chekuti hove dzako dziri munjodzi. Sezvo hove dzako dzinotora oksijeni kubva mumvura, dzinobudisa carbon dioxide.
Nguva Dzakanakisa dzekuredza Mangwanani Mangwanani. 6:00 am kusvika 9:00 am Kunonoka Mangwanani kusvika Masikati. 9:00 am kusvika 1:00 masikati kusvika Madekwana. 1:00 pm kusvika 5:00 pm
Nepo hove dzisingarari nenzira imwechete inovata mhuka dzinoyamwisa, hove zhinji dzinozorora. Kutsvagurudza kunoratidza kuti hove dzinogona kudzora mashandiro avo uye metabolism pavanenge vachiramba vakangwarira njodzi. Dzimwe hove dzinoyangarara munzvimbo dzadzo, dzimwe dzinozvisungirira munzvimbo yakachengeteka mumatope kana mukorari, uye dzimwe dzinotowana dendere rakakodzera.
Munzvimbo dzemumahombekombe, pedyo nemahombekombe, pasi pegungwa pakafukidzwa zvakanyanya nejecha asi panogonawo kunge paine zvikamu zvematombo ari pachena. Hove dzinogara pakadzika pese mumvura yemahombekombe, asi zhinji dzinogara pedyo nepasi. Dzakawanda dzinodyira pedyo nepakavharo, dzakadai sedombo kana kuti coral reef, uko dzinogona kuvandira mhuka.
Ndeipi Hove Yakakura Yati Yambobatwa? Maererano neGFA zvinyorwa, hove huru yakambobatwa yaiva shark huru chena yairema 2,664 pounds (1,208.389 kg.). Abatwa kubva pamhenderekedzo yeCeduna, Australia, muna 1959, zvakatorera Alfred Dean mubati wehove maminetsi makumi mashanu chete kuti akunde mukurwisana neiyi shark yetani imwe.
Sezvatataura pamusoro, lenzi dzemhangura (brown kana amber) dzakanakira kuona-hove. Pane chimwe chinhu chekufunga nezvacho: mamiriro echiedza akakupoteredza. Kunyangwe iwe uri kuona-kubata hove kana kwete, kana kwakafukidzira, kuine makore kana neimwe nzira "yakaderera mamiriro," saka iwe unenge uchifara zvakanyanya kupfeka lenzi dzemhangura.
Malenzi egrey akanakira kuredza kunze kwenyika uko zuva rinopisa uye rakanyanya nekuti anopa dziviriro yakanyanya. Kana iwe wakananga kunovhura mvura uye uchida kuisa pamberi pekudzivirira-kuvharika pamusoro pekuwedzera kwemavara, grey ndiyo yakanakisa lens yekuredza.
Kune offshore, girazi rebhuruu ndiyo nzira yekuenda nayo. Kune mvura yakachena uye inshore, girazi regirini nemhangura ndizvo zvakanakisa sarudzo. Kune chiedza chakaderera mambakwedza kana manheru, kubuda kwezuva sirivheri girazi rakakwana. Grey lenses ndiyo yakanakisa sarudzo yemazuva ese zviitiko.
Mubvunzo: Hove Inogona Kupfeka Macontact Lens
Mubvunzo: Sei Iss Ichishandisa Hove Eye Lenses
Mubvunzo: Chii Chinonzi Cold Water Hove
Ndeipi Mvura Yenguva YeBetta Hove
Iyo Mvura Inoda Betta Hove
Chii Hove Inosvetuka Kubva Mumvura
Chii Chakanaka Mvura Inotonhora Hove
Mubvunzo: Hove Dzinodyei Mumvura
Mubvunzo: Hove dzeMvura yeGungwa Dzinodyei
Chii chinonzi Tembiricha Betta Hove Mvura
Mhinduro Kurumidza: Ko Ngirozi Hove Mvura Yakachena Here Kana Hove Mvura Yemunyu
Mhinduro Yekukurumidza: Imbwa Dzinogona Kushandisa Rudzi Blind Lenses
Inogona Kushandura Malenzi Anogona Kushandiswa Kuredza